Global Voices teny Malagasy · 2 Janoary 2011
02 Janoary 2011
Tantara tamin'ny 02 Janoary 2011
Tonizia: Mpisolovava voadaroka noho izy ireo mijoro ho an'i Sidi Bouzid
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Janoary 2011
Nijoro ireo mpisolovava Toniziana nanomboka tamin'ny trangan'i Sidi Bouzid - ary dia nanefa ny sandan'izany. Tsy nitsahatra ny nanohitra izy ireo mba hanoherana ny zava-mitranga any. Ary isan'andro, vaovao mikasika fangalàna an-keriny, fisamborana, na fanafihana mpisolovava no mivoaka amin'ny vohikalan'ireo tambajotra sosialy.
Nanambara ny fitsaharan'ny fiakaram-bidin'ny solika nandritra ny faran'ny taona ny governemanta Jordaniana. Ny vidin'ny entona fandrehitra, raha alaina ho ohatra ny benzine, dia niakatra 9 isan-jato, raha 6 isan-jato kosa ho an'ny vidin'ny gazole sy ny kerosene. Maro ny Jordaniana no naneho ny tsy hafalian-dry zareo tamin'ny alalan'ny esoeso manafintohina...
Ny 21 Desambra 2010 teo dia nampanao fifidianana ny ho governemantan'ny mpianatra ao aminy ny Anjerimanontolon'i Jordania. Noho ny fisian'ny tatitra momba ny herisetra sy tsy fetezan-javatra nandritra ny fifidianana, namoaka fanambaràna haingana ny Anjerimanontolo manohitra ny filazana fa hoe nisy korontana. Herinandro roa latsaka taty aoriana, mbola nisy korontana...
Tahir Nassar, mpisolovava iray sady kandida nirotsaka hofidiana tao amin'ny antenimiera, dia nosamborina sy notànana any am-ponja Jordaniana noho ny fiampangana azy ho "nihantsy ady eo amin'ny sekta." Ny helok'i Nassar dia ny fandaharan'asam-pifidianany izay mampibaribary ny fanavakavahana mianjady amin'ireo Jordaniana manana fiaviana Palestiana. Naneho hevitra manodidina ilay vaovao ireo...